EzeZimbabwe, 24 Ntulikazi 2019
ngoLwesithathu 24 Ntulikazi 2019
Odokotela beZIMA Bakhala Ngokungahlawulwa yiPSMA
Odokotela beZIMA baveze emhlanganweni lentathelizindaba owenzelwe emahofisini abo wokwazisa ngesimo sokungahlawulwa lapho belaphe izigulane ezingamalunga awe Premier Medical Aid Association-PSMAS.
'Ikhomishini Yenkohlakalo eZimbabwe Kumele Ibe Lesibindi njengeyaseSouth Africa'
Osomatekisi beZimbabwe labeBotswana Balwela Izihambi Emngceleni wePlumtree
Sekuqhamuke ukungezwani phakathi kwabatshayeli bezimota ezithwala uzulu, abakweleBotswana labeZimbabwe edolobheni leFrancistown bebanga ibhizimusi.
UTrump Ulakho Ukubanjwa Ngumthetho Esesukile Esihlalweni Kucala Lokuvimba Uphenyo Lwakhe, Kutsho uMueller
Umtshutshisi owakhokhela uphenyo lokucwayisisa ukungenela kukahulumende weRussia kukhetho lweMelika uphe ubufakazi edale leCongress wagcizelela ukuthi uTrump ulakho ukubanjwa ngumthetho nxa esesukile esikhundleni.
Ukukhwela Kwentengo yePetulo Sokubangele Ukuqonga Kwentengo Yempahla Ezitolo
Lokhu kukhwela ngokwesihlanu kusukela ekuqaleni komnyaka.
Sesimelele Impumela Yophenyo Lukahulumende Kudaba lukaTown Clerk, Kutsho uMayor wakoBulawayo
UMayor wakoBulawayo, uMnu Solomon Mguni uthi sebemelele impumela yequla likahulumende eliphenya udaba lokuxotshwa umsebenzi kukamabhalane wekhansili yaleli dolobho, uMnu Christopher Dube.
AbeARTUZ Basungula Imfundiso Yenhlelo Zemisebenzi Yezandla Lamabhizimusi
Iqembu lakuqala lababalisi beARTUZ abazathola imfundiso likhangelelwe ukuthi lingaqheda beselisiyafundisa abanye, ngenjongo yokuthuthukisa impilo yababalisi benelise ukuthola inzuzo eceleni bengameleli iholo.
Abathenga Impahla Phandle Bakhala Ngokulahlekelwa Yinzuzo Ngenxa Yokumiswa Kwemali Yakwamanye Amazwe
Abathenga impahla ngaphandle kwelizwe, ikakhulu kweleBotswana bezithengisa eZimbabwe bathi ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, okugoqela idola leMelika sekudale ukwehla kwenzuzo kubhizimusi labo.